NgoSeptemba 21: Yiyiphi iholide yeholide. Ukuzalwa kukaMariya oyintombi ngeSeptemba 21
KwiOrthodoxy, kukho into enjalo njengemihlangano emibini yexesha. Ezi ziganeko ezihlobene ngokusondeleyo kubomi bukaYesu Kristu nonina-Intombi kaMariya. Ngaloo ndlela, iNkosi kunye noMama wemihla kaThixo bahluke. Iholide yeholide ngoSeptemba 21 yiB Bogorodsky, kuba inikezelwe kwisiganeko ebomini beNtombikazi kaMariya.
Ukuzalwa okumangalisayo kukaMariya
Kunengqiqo ukucinga ukuba ukuzalwa komama kaMesiya kwakungeke kwenzeke ngengozi, kodwa bekubangelwa ngamabomu. Ngoko, kanye kwidolophu encinane yaseNazarete wayehlala isibini esitshatileyo-uJoachim no-Anna.
Esi sibini sasihlangene iminyaka engama-50, kodwa abazange bakwazi ukukhulelwa umntwana. Emva kokuba uAna ekhala ngale nto engadini, ekhangele intenyeni yenyoni: "Nokuba iintaka zinokuba nabantwana, ndiyintoni na into yokuba ndibe nesizungu namhlanje kwaye ndide ndiphele?". Ngomzuzu ofanayo, owesifazane wayiva ilizwi likaThixo ephuma esibhakabhakeni, evakalisa ukuba wayezimisele ukuzala intombi eyayiza kusindisa uluntu.
Emva kweenyanga ezili-9, intombazana kaMariya yabonakala, kwaye uJoachima noAna babizwa ngokuba yi-Godfathers. Enyanisweni, ukususela ngeli thuba ibali lokusindiswa koluntu lwaqala, ngoko umhla wokuzalwa kukaMama ka-Septemba 21 uthathwa njengenye yeeholide ezinkulu zebandla.
World Glee: Indlela iBandla eligubha ngayo uSeptemba 21
Ukubhiyozela ukuzalwa kukaNtombikazi kaMariya ngokusemthethweni kwaqala ngenkulungwane ye-IV, kwaye ukususela ngaloo nyaka unyaka lubhekwa njengomhla wovuyo jikelele. Ukuzalwa kweTheotokos ngumcimbi wokuqala odibene neVangeli kunye neyokuqala kweeholide ezili-12 ezinkulu zeeholide.
Kulo suku lwekhalenda, kuzo zonke iicawa zamaKristu, iinkonzo zendalo zikaThixo zenzeke, ezidlula phantse ngosuku. Amakholwa adumisa uMongcwele ongcwele, vuyisana ngoSindiso kwaye vuyisana ngomhla omkhulu.
Kuyathakazelisa ukuba iSonto lamaKatolika alibhiyozeli iKrismesi kuphela yokukhanya okuyingcwele, kodwa kunye nokukhulelwa kwayo, ewela ngomhla kaDisemba 9, kodwa iOthodox ayiboni loo mhla, kuba umtshato womntu uvela kwisono. AmaKatolika ayicinga ukuba angacacile, ngelixa amaKrestu akholelwa ukuba kuphela ukukhulelwa kukaYesu Kristu, kwaye uMariya, ozelwe ngokwemvelo, oko kukuthi, esonweni, wayefuna ukukhululwa.
Iimpawu zekwindla ekwindla
Kukho imiqondiso emininzi, imasiko kunye nokuxoxwa kweenhlanhla, ezinokubanjelwa kuKuzalwa kukaMariya oyintombi. Le mini ibizwa ngokuba ngumhla wokuvuya, kuba indlela yokusindiswa yavulelwa kwihlabathi. Yiyiphi iholide yenkolo inokuba yinto ecocekileyo ngakumbi ebangela ukuba yonke into ivuyiswe? NgoSeptemba 21 - umhla wecawa, xa abazali beza kubantwana babo baze bafundise ubulumko, kwaye ke babengenakukuthobela imithetho yabo. (umrhumo kubazali beNdombikazi enyulukileyo kaMariya kunye naye njengomama woMsindisi).
Kukholelwa ukuba umtshato, odlalwa ngoSeptemba 21 kwimthendeleko yecawa, uza kuzisa abantu abasandul 'ukutshatyalaliswa novuyo ubomi. Ikhefu leKwindla yayibhiyozelwa ngendlela enkulu - yenza izinto ezininzi, idibanise itafile ngokugqithiseleyo - luhlobo luni lwetafile, olunjalo kunye nobomi kuya kuba ngumnyaka ozayo. Intombazana kule mihla engcwele yayingacinga ukuba i-betrothed, kwaye ukuba namhlanje ucoce izandla zakho - kufuneka ulinde inzuzo okanye ukuphakanyiswa komsebenzi.
Uvela phi le meme? "Le yi-fiasco, bro": Ividiyo epheleleyo
Indlela yokulungiselela iplanga edibeneyo?
"Iron Iron 2" iya kudutshulwa kwi-3D
UTina Kandelaki wahleka ngenxa yempumelelo yezemidlalo, ifoto
Ukupheka kwamadoda ukuphucula imemori
Iimbangela zokunyuka ngokweqile kubantwana
Uhamba ngamakhowa kunye noshizi oluhlaza okwesibhakabhaka
Indlela yokufaka ngokufanelekileyo i-buttock
Amadoda abakhetha ntoni: i-bitch okanye i-cutie?
Iipropati eziwusizo zezityalo ezomileyo